यी काम अपुरो कहिल्यै नछोड्नुहोस्! जसका कारण जीवनमा हानी बेहोर्नुपर्छ – Hamrosandesh.com
यी काम अपुरो कहिल्यै नछोड्नुहोस्! जसका कारण जीवनमा हानी बेहोर्नुपर्छ
धर्ममा आस्था राख्ने हिन्दुहरुले शास्त्रीय नियम कानुनलाई उलंघन गर्न कदापी सक्दैनन् । जीवनमा सुख शान्ती र आनन्द प्राप्ती गर्नको लागि शास्त्रले थुप्रै खालका नियमहरु सिकाएको हुन्छ । जसको पालना गर्दा मान्छे जीवनमा सधै खुसी र सुखी हुन्छ ।
गीतापैसमा उल्लेख गरिएको गरुड पुराणको संक्षिप्त नियममा पनि मानव जीवनमा अति आवश्यक पर्ने नियमहरु सिकाएको हुन्छ । त्यस्तै गरुड पुराणमा उल्लेख गरिएको चार काम जुन अपूरो छोड्दा जीवनमा भोग्नु पर्ने समस्याको बारेमा बताइएको छ । हेरौँ के के हुन् त ती कामहरु :
ऋण चुक्ता : यदि तपाईले कहि कतै बाट ऋण लिनुभएको छ भने त्यो पैसा जसरी भएपनि तिर्नु पर्ने हुन्छ । यदि तपाईले ल्याएको ऋण तिनै नसक्दा व्याजको कारण जीवनमा थप समस्या उत्पन्न हुन्छ । यदि आफन्तसँग लिएको उधारो वा ऋण चुक्ता गर्न सकेन् भने आफन्तसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन्छ ।
बिरामीको उपचार : यदि कुनै रोगको बिरामी उपचार गर्न जान्छ भने त्यस्तो ब्यक्तिको उपचारको लागि आवश्यक परामर्शबाट जरैदेखि निमूल पार्न सक्नुपर्छ । जुन व्यत्ति, उपचारबाट पुर्ण स्वस्थ बन्न सक्दैन् त्यस्तो ब्यक्तिलाई उक्त समस्याले पटक पटक सताउन सक्छ । त्यस कारण जुनसुकै रोग भएपनि बिरामीको उपचार गर्दा पुर्ण रुपमा निर्मूल पार्ने गरेर मात्र उपचार गर्नुपर्दछ ।
आगो निभाउनु : कुनै ठाउँमा आगो लागेको छ भने त्यसलाई पुर्ण रुपमा भिजाएर मात्र छोड्पर्छ यदि कतै सानो आगोको झिका मात्रै बाँकी रह्यो भने त्यो सानो आगोको झिल्कोले नै ठूलो रुप लिन्छ र धेरै धनजनको क्षति गर्छ ।
शत्रुता : यदि कोही मानिसले तपाईलाई बारम्बार दुख दिन्छ भने त्यसलाई कुनै न कुनै उपाय लगाएर भएपनि सक्नै पर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने आफ्नो सफलतामा उन सधै बाधा बनेर आउने गर्छ ।